नवजात शिशुकाे स्याहारमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू
भदौ ६, २०७५ बुधवार १६:३१:४१
गर्भवती हुनु र सकुशल स्वस्थ्य बच्चा जन्माउनु सम्पूर्ण आमाहरूको लागि एक ठूलो चुनौती हो। लडाइँमा गएको सिपाही घर फर्कने–नफकर्ने निधो नभएको जस्तै हो आमा बन्नु। तसर्थ आमा सधैँ महान् रहन्छिन्। उनीहरूलाई श्रीमान्, छोराछोरी, सासु, ससुरासहित सबै परिवारले माया गर्नु पर्द...
किन हुन्छ महिनावारी गडबडी ?
भदौ ६, २०७५ बुधवार ०६:००:००
महिलाहरूका लागि महिनावारी नियमित प्रक्रिया हो। सामान्यतया ः १० वर्षको उमेरबाट सुरु भई ५०–५५ वर्षसम्म महिनवारी चल्न सक्छ । कुन उमेरमा महिनावारी सुरु हुन्छ भनेर यकिन गर्न सकिन्न, हरेकको फरकफरक समयमा सुरु हुन सक्छ। यो समयमा धेरैलाई विभिन्नखाले समस्या ...
दम्पतीबीच चर्को विवाद हुने र बढी रिसाउने ‘हाइपोमेनिया’ रोग के हो ?
साउन ३१, २०७५ बिहिवार ०७:००:००
हाइपोमेनिया यस्तो रोग हो, जसमा मानिसको मन अस्थिर रहन्छ। यस्ता मानिस बढी बोलिरहनुपर्ने हुन्छ। आफ्ना कुरामा जिद्दी गर्ने र भनेको नमान्ने, अपशब्द बोल्ने, सानो कुरामा पनि बढी रिसाउने, मन सधैं चञ्चल रहने हुन्छ। यो रोग लागेको हो भनेर ठम्याउन गाह्रो हुन्छ। हाइपोमेनिय...
फिजियोथेरापीः हाडजोर्नी, नसा, स्पोर्टस, गाइनेकोलोजी लगायतका १० वटा विभागमा कस्तो भूमिका छ?
साउन ३०, २०७५ बुधवार ०८:०९:००
फिजियोथेरापी स्वस्थ जीवनशैलीलाई बढावा दिने उपचार पद्धति हो। यसले शारीरिक अभ्यास र फिजियोथेराप्युटिक मेसिनहरूद्वारा रोगको निदान तथा असक्षमता रोक्न सहायता पुर्‍याउँछ। यसले हाडजोर्नी तथा नसासम्बन्धी समस्याबाट भएको दुखाइ कम गर्नुका साथै अझै बढ्नबाट रोक्नसमेत सहयोग गर्छ...
काठमाडौंमा हेपाटाइटिस 'ई' देखियो, यी हुन् ८ लक्षण, बढी जोखिममा गर्भवती
साउन २०, २०७५ आइतवार ०७:००:००
एक वयस्कको आँखा पहेँलो हुनुका साथसाथै बान्ता हुने, वाक–वाक लाग्ने, पेट दुख्नेलगायत लक्षण देखेपछि मसँग व्यक्तिगत रुपमा परामर्श लिन आइपुगेका थिएँ। शंका लागेर जाँच गर्दा हेपाटाइटिस 'ई' देखियो। यो नै यो वर्षको पहिलो हेपाटाइटिस...
नेपालमै हुन्छ क्यान्सरको उपचार
साउन १९, २०७५ शनिवार १७:२८:२३
नेपालमा क्यान्सरको अवस्था बढ्दो क्रममा छ। यो रोग शरीरका कुनै पनि अंगमा र जुनसुकै उमेरमा पनि लाग्न सक्छ। विगतमा पनि क्यान्सरका बिरामी नभएका होइनन्। पहिले पनि मानिसहरू क्यान्सरबाट मर्थे। तर त्यसको कारण थाहा हुँदैथ्यो। तर अहिले रोग निदानको विकाससँगै यो पत्ता लाग्ने क्रम बढ...
कलेजोमा हुने संक्रमण हेपाटाइटिस के हो, के कारणले हुन्छ? कसरी जोगिने?
साउन १२, २०७५ शनिवार ०७:००:००
हेपाटाइटिस भन्नाले विभिन्न संक्रमणका कारणले कलेजोमा सुन्निने अवस्थालाई बुझिन्छ। कलेजोमा ‘हेपाटोट्रोपिक भाइरस’ का कारण हुने संक्रमणलाई भाइरल हेपाटाइटिस भनिन्छ। हेपाटाइटिस ‘ए’ देखी ‘इ’ सम्म गरी जम्मा पाँच प्रकारका हुन्छन्। तुलनात्...
सरकार होइन, डा केसी पो रहेछन् कम्युनिस्ट
साउन १, २०७५ मगलवार ०७:००:००
डा गोविन्द केसीको माग पूरा गर्दा विचारका सच्चा कम्युनिस्ट भनिनेसँग अब आममानिसले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। व्यवहारका सच्चा कम्युनिस्टले गर्नुपर्ने काम डा केसीले गरेर सरकारलाई सहयोग गरिदिँदा पनि दुई तिहाइको 'कम्युनिस्ट' सरकारले अनुशरण नगरिरहँदा सरकार कम्युन...
आराम गर्दा मेरुदण्ड दुख्ने रोग स्पोनडाइलो आर्थराइटिस के हो?
साउन १, २०७५ मगलवार ०६:००:००
केही मानिसमा आराम गर्दा मेरुदण्ड दुख्ने तर काम वा हिँडडुल गर्दा कम हुने समस्या देखिन्छ। यसलाई ‘स्पोनडाइलो आर्थराइटिस’ अर्थात् बोलीचालीको भाषामा मेरुदण्डको बाथ भनिन्छ। यसलाई सामान्य रुपमा मेरुदण्डको रोगको रुपमा लिइए पनि यसले शरीरका अन्य जोर्नी र अंगमा पनि उ...
मोबाइल, ट्याब तथा ल्यापटप चलाउनेलाई हुने ‘टेक्स्ट नेक’ समस्या के हो ?
असार २७, २०७५ बुधवार ०६:००:००
प्रविधिको विकास र अत्यधिक प्रयोगसँगै आजकाल अधिकांस मानिस काँध र पिठ्युँको मांसपेशी दुख्ने समस्याबाट पीडित छन्। बाध्यतावश होस् या लतका कारण, मोबाइल, ल्यापटपमा घण्टौं झुण्डिरहने जमात बढ्दो छ। अष्ट्रेलियामा हालै गरिएको एक अध्ययनमा मोबाइल फोन प्रयोग गरेका बेला अधि...
आन्द्रालाई छोप्ने झिल्लीमा कसरी क्यान्सर हुन्छ? उपचार के?
असार २५, २०७५ सोमवार ०६:००:००
हाम्रो पेटको भित्री भागमा आन्द्रालाई बेर्ने ‘पेरिटोनियम’ नामको पातलो झिल्ली हुन्छ। यसको मुख्य काम आन्द्रालाई छोप्नु हो। विभिन्न कारणले यो अंगमा क्यान्सर फैलन सक्छ। यसमा एपेन्डिक्स, डिम्बासय तथा ठूलो आन्द्राको क्यान्सर फैलन सक्छ। यस्तो क्यान्सरलाई पेरिटोनियम क्यान्सर भ...
असार २४, २०७५ आइतवार ०७:००:००
संसारमा जहाँपनि बाढीपहिरो आएपछि लेप्टोइस्पाइरोसिस संक्रमणको चर्चा हुने गर्दछ। समाचार संस्था बीबीसीका अनुसार सन् २००५ मा भारतमा बाढी आउँदा छैसठ्ठी जनाको मृत्यु पानीजन्य संक्रमण लेप्टोइस्पाइरोसिसको कारणले भएको शंका गरिएको थियो । दक्षिण अमेरिकी देश गुयानामा पनि सन् २००५...
असार २२, २०७५ शुक्रवार ०६:००:००
सानो उमेरका मानिस हुन् या ठूलो उमेरका, दाँतको उपचार भनेपछि सबैको मनमा एक खालको डर सिर्जना हुन्छ। डर नलागोस् पनि कसरी? सुक्खा ओठ, मुखभित्र प्रयोग हुने धारिला औजार, चिसो पानीको छर्काइ, कतै ड्रिल गर्ने मेसिनको आवाज। कतिपय मानिसहरु दन्तचिकित्सकसँग यति डराउँछन् कि उनीहर...
असार २१, २०७५ बिहिवार ०६:००:००
मानिसको मुटुको चाल सामान्य अवस्थामा एक मिनेटमा ५० देखि १०० पटकसम्म धड्कन्छ। मुटुको नियमित धड्कनलाई ‘साइनस रिदम’ भनिन्छ। तर ५० भन्दा कम वा १०० भन्दा बढी चाल भयो भने समस्या निम्तन्छ। नियमितभन्दा कम या बढीपटक धड् कियो र बिरामीलाई गाह्रो भयो भने हामी...
किन राखिन्छ बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा?
असार १३, २०७५ बुधवार १२:४७:४०
अधिकांश गम्भीर खालका बिरामीलाई अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखिन्छ। तर भेन्टिलेटर भनेको के हो? किन बिरामीलाई यसमा राखिन्छ? भेन्टिलेटरमा राखेपछि छिट्टै सन्चो हुन्छ? अथवा यसमा बिरामीलाई अन्तिम अवस्थामा राखिन्छ? कहिलेकाही हामी प्राण गएको बिरामीलाई पनि अस्पतालले भेन्टिलेटरमा र...
छालालाई सेतो वा खैरो देखाउने दुबी के हो र किन हुन्छ?
असार १२, २०७५ मगलवार १९:२४:१२
छालामा केही सेतो देखिने बित्तिकै दुबी भन्ने गरिन्छ । हरेक सेतो दाग दुबी हँुदैन । दुबी विभिन्न थरीका हुन्छन् । एउटा खैरो दुबी हुन्छ, अर्को सेतो दुबी हुन्छ । खैरो दुबी मान्छेको ढाडमा, घाँटीमा कपडाले छोप्ने भागमा हुन्छ । यो फंगल इन्फेकसनले गर्दा हुने गर्छ । पसिनाले फ...
दूधमा भेटिएको कोलिफर्म कति हानिकारक ?
असार १२, २०७५ मगलवार १२:२२:१२
राजधानीका प्रशोधित दूध डेरीमा मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने कोलिफर्म नामक जीवाणु भेटिएको छ। पहिले पानीमा मात्र भेटिने गरेको सुनिने यो जिवाणुले मानिसको स्वास्थ्यमा हानी पुर्‍याउँछ। के हो कोलिफर्म ? कोलिफर्म भनेको जिवाणुहरूको समूह हो। बाहिरी वात...
के हो स्तन जोगाएर गरिने शल्यक्रिया ? कसरी गरिन्छ ?
असार १०, २०७५ आइतवार ०६:००:००
स्तन क्यान्सर भएको थाहा पाएपछि अधिकांश महिलाहरु आफ्नो महत्वपूर्ण अंग गुम्ने भयो, शारीरिक सुन्दरता बिग्रने भयो भनेर चिन्ता गर्छन्। तर, स्तन जोगाएर पनि उपचार गर्न सकिन्छ, जुन विधि नेपालमा पनि सुरु भइसकेको छ। स्तन जोगाएरै गरिने स्तन क्यान्सरको उपचार विधि एक वर्षअघि देखि नै न...
के हो अल्छी आँखा? कारण, लक्षण र उपचार
असार ९, २०७५ शनिवार ०७:००:००
हामीले आफ्ना बालबालिकाको आँखाको दृष्टि ठीक छ की छैन भनेर समय समयमा जाँच गराई रहनु पर्छ। आफ्ना नानीहरुलाई स्कुल पठाउनु अगाडि उनीहरुको आँखाको जाँच गर्नु अनिवार्य हुन्छ। समयमा नै आँखाको समस्या थाहा पाएमा उपचार गर्न सजिलो हुन्छ। स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरुको आँखा कमजोरी शि...
कसरी हुन्छ फोक्सोमा संक्रमण? कसरी बच्ने?
असार ४, २०७५ सोमवार ०६:००:००
फोक्सो के हो ? फोक्सो श्वासप्रश्वासका लागि महत्वपूर्ण अंग हो। शरीरमा फोक्सोका दुई भाग हुन्छन्, दायाँ र बायाँ। यो श्वासनलीसँग जोडिएको हुन्छ। हामीले लिएको सास नाक, मुख, ं श्वासनली हुँदै फोक्सोको दुवै भागमा जान्छ। फोक्सोको अन्तिममा रहेको अंगुरको झुप्पाजस्तो भागमा पुग...
१. जिल्ला जन/स्वास्थ्य कार्यालय खारेज हुँदै, तत्कालै निर्णय गर्न जनस्वास्थ्य संघको माग
२. डा मणीन्द्ररञ्जन बरालको पुस्तक ‘नियति र अनुभूति’ विमोचित
३. काँचो बन्दा वा मासु खाँदा मस्तिष्कमा गम्भिर असर
४. मधुमेहका बिरामी र दसैंको खानपान
५. खानपान र घुमघामका लागि मात्र होइन दसैंमा स्वास्थ्यका लागि पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ : डा.सन्देश जिसी
६. दसैंको टीकाको दिन नै नाइट ड्युटी पर्‍यो : नर्स सोफिया प्रधान
७. १४ तस्बिरमा हेरौं डा ज्योति ज्ञवालीको दसैं मुस्कान
८. गुणकारी जमराको रस
९. मेची अञ्चल आयुर्वेद औषधालयको स्तरोन्नतिका लागि स्वीकृति प्रदान
१०. परिवारका ४ जनामा हात्तीपाइले, उपचारमा समस्या हुँदा खल्लाे भयाे दसैं
१. दसैंमा दुई दिन भन्दा बढी ओपिडी बन्द नगर्न देशभरका अस्पताललाई पत्र
२. दसैंमा डाक्टरको सुझाब : रातो र पोलेको मासु नखाने
३. जब दसैंको टिकाकै दिन मैले जाँचेको बिरामीको मृत्यु भयो...
४. शल्यक्रियाअघि बिरामीलाई बेहोस बनाइने एनेस्थेसिया के हो?
५. सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ फिजिसियनमा नयाँ कार्यसमिति चयन